Nepalistudio » सप्तरीको कोशी-बलान ,खाडो र महुली खोलाको क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
सप्तरीको कोशी-बलान ,खाडो र महुली खोलाको क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
सप्तरीको विभिन्न स्थानमा धेरै ठूलो वर्षा हुने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसमविद्ले आग्रह गरेका छन् । आज बिहानैदेखि देशभर वर्षा जारी रहेको छ । सप्तरीको कोशी-बलान ,खाडो र महुली खोलाको क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज खासगरी सप्तरी को विभिन्न क्षेत्रका केही स्थानमा भारी भारी वर्षा हुने सम्भावना छ।
महाशाखाले भनेको छ “मेची,निन्दा,विरिङ,मावा-रतुवा,नुनखोला,लोहन्द्रा,वुढीखोला,खेसिलिया,सुनशरी खोला,त्रियुगा, वालन, खुट्टी,चुरियाखोला,खाडो,माहुली,रातो,हर्दी,लालबकैया लगायत साना नदी जलाधारको धेरै स्थानहरूमा सतर्कता भन्दा माथि बाढी आउनेगरी बर्षा भईरहेकोले तटिय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाऔ ” ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबार बिहान जारी गरेको आगामी तीन दिनसम्मको मौसम अनुमान यस्तो छ :
दिउँसोः देशभर अधिकांश वदलि रही धेरैजसो स्थानहरुमा वर्षा हुनेछ। देशको खासगरि पूर्व र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षा हुनेछ भने पूर्व क्षेत्रका तराई र मध्य पहाडका थोरै ठाउँहमा अति भारी वर्षासमेत हुनेछ। देशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावनासमेत छ।
दिउँसोः देशभर व्यापकक्षेत्रमा वर्षा जारी रहनेछ। खासगरी पूर्व र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षा हुनेछ भने पूर्व र मध्य क्षेत्रका मध्य पहाड र तराईका थोरै ठाउँमा धेरै भारी वर्षासमेत हुनेछ।
राति : देशभर व्यापकक्षेत्रमा वर्षा जारी रहनेछ। खासगरी पूर्व र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षा हुनेछ भने पूर्व र मध्य क्षेत्रका मध्य पहाड र तराईका थोरै ठाउँमा धेरै भारी वर्षासमेत हुनेछ।
प्रकाशित मिति :- २७ असार २०७६, शुक्रबार १५:०५
वाक्सिङ गर्दा छालामा कस्तो असर हुन्छ ?
पानीमा डुबेर चार जनाको मृत्यु
के हो शिलाजित ? कसरी बन्छ ?
तिलाठी कोइलाडीमा बाढिको बिदण्डा
सप्तरीमा २० घर बगे, एक हजार घर डुबानमा
सिरहामा छ सय परिवार विस्थापित